HomeAfaan OromooShira Haaraa ittiin OPDOn Gadi bawuuf jettuu; Aayiraa Gullisoo Lafa Dhiigaa Akeeldaamaa
Shira Haaraa ittiin OPDOn Gadi bawuuf jettuu hubadhaa Oromoo
Waan Amma Deema Jiru, Qeerroofi Ummanni Beekuu qabu.
Mootummaan Amma Dallansuu Ummataa Hubatee afaan Mi’aawwee as ba’aa jira. Tasa Ummati Oromoo 2ffaa Mootummaa Wayyaneen hundeeffamte kana Sekendiif amanuu hin qabu…
Vidiyoo Waggaa Tokkoon duraa as ba’aanii babbaqaquu jalqabanii jiru. kun yaada nama hatuuf, tarii ummata biratti fudhatamuu dandeenyaa laa jedhanii yaadaa jiru. Kanaaf Haasaa OPDOn goote, Ebaluun akkas jedheera jedhee namni haasaa isaaniin ummata taaggolchu yoo jiraate Qeerroon tarkaanfii irraatti fudhachuu qaba.
Lammaafi Abiyyiin Dhuguma walii galuu dadhabaniiru. Garuu waan qabsaa’oota Oromoof Karaa haqaa irratti falmaa jiran galchu hin qabu. Kanaan immoo OPDOn boquu wal-qabachuuf tattaaffii gochaa jirti. Kanas Afarsuun Hin Barbaachisu. Walii galaniis, Dhiisaniis Gumaa Wareegamtoota keenyaa Bilisummaa Oromiyaan Baasna.
Amaaroonni Kallattii hundaan Oromoorratti lola banuuf qophi jabaa irra jirti. Walloo, Adaamaa, Dirree Dhawaa, Finfinneefi Bushooftuutti qophii gochaa jirti. Amma ifaan ifatti Walloofi Dirree Dhawaatti bananii jiru. Kanneen hafan irrattiis qophii gochaa jirti. Ragaan Kana mirkaneessu:- Goraadee, Billaafi Meeshaa Lolaa adda addaa Kuma 5nii Ol-yeroo darbe Finfinnee utuu seenu Debrebirhaanitti qabame, Qawwee Kilaashii, Shugguxiifi kanneen biroon karaa adda addaa Finfinnee seenaa jiraachuun ifa galaadha.
Walitti Baquu Toophiyaa ilaalchisee; Adeemsa Sabummaa jedhu nama keessaa balleessuuf Naannoolee Balleessinee, ADWI Balleessinee “Yee Tophiya Biltsiginnaa” Ijaarra jedhanii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Amaaraafi Ummata kibbaa ta’aanii walii galaniiru. TPLF garuu akka dide Midiyaatti ba’ee ifoomseera.
Opdon Oromoo Irraanfachiisuuf Sabaafi saba walitti buusuuf, Amantaafi Amantaa walitti buusuuf umurii dheereffachuu barbaada. Kanaaf Qeerroofi Qarreen Shira kana beekanii sochii Fincila gaggeessan Keessatti baayee of-eggannoo gochuu qabu.
Alaabaa Minilikii, Alaabaa ABO jechuun Ajandaa Qeerrootti Uumuun, Ammoo Deebitee Deggeruun Fudhatama argattee itti Boquu olqabachuuf Yaalii gochaa jirti.
OPDO keessaa Addisuu, Shimalliis, Awwaliifi Kaasahuntu Abiyyii waliin hijjechaa jira. Lammaan Amma ummati afarsuu barbaadu Aangoo hin qabu. osoo aangoo qabaatee, Lammaan Alaabaa Eyyamee, Shimallis immoo dide…waanti dhufu hin jiru. Ummatiifi Qeerroon Qabsootti Cicee sirna kana Ofirraa buusuu qaba..
Aayiraa Gullisoo Lafa Dhiigaa Akeeldaamaa
#Aayiraa (09/01/2012) – Guyyooni Akka Lakkofsa Itiyoophiyaati
‘Guyyaan isaa Jimaata, Gaafa 09/01/2012 tilmaamaan ganama keessaa sa’a 2:30 ta’a. RIB, Poolisii Oromiyaafi milishaan gandaa qindoominaan dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa ajjeessuuf konkolaataa Ambulaansii keessa dhossanii magaalaa Aayiraa fuudhaanii wayita ba’an shiftaa qabnee jirra, bakka meeshaan dhokfame nutti agarsiisuuf deemaa jirra jechuun dursanii uummata gara dabsan.
Waan kana ta’eef, uummati naannoofi maatiin Gammachuu eenyuufi maaliif magaalaa keessaa fudhanii akka ba’an waan beekan tokkoollee waan hin turreef dirmachuufii hin dandeenye . Egaa Magaalaa Aayiraa irraa daandii Yuubdoo – Dambii Dolloo irra km 13 imaluun ganda Malkaa Qilxuu ga’anii jiru. Achiin Dar. Gammachuu Gaaromsaa harki isaa duubatti hidhamee akka jirutti konkolaataa irraa gadi buusanii bosoona ganda baadiyaa Malkaa Qilxuutti argamu keessa galchaan. Miseensonnii RIB fi Poolisii Oromiyaa gara laafinaa tokko malee saanjaan garaafi qaama isaa mara dadayyaasan. Akka isaan fedhanitti gooti ija barbadaa laayyootti lubbuun isaa darbuu didde. Darabeen kan milishaati; rasaasa afaan isaa keessan ittii roobsuun lubbuu isaa dabarsun xumura itti godhan. Kan nama gaddisisuu miliquuf jennaan ajjeesne jedhu warri cubbuu hin sodaanne. Eegaa figee saanjaan eessaa dhufee fulleen waraanee? Bira geenyaan waraanan mitii; qabuun hin danda’amu turee? Namoonni reeffa isaa ijaan argan akka himanitti; rasaasi kan itti dhukaafame afaan isaa keessatti. Him! Raajidha! egaa Gammachuun harki duubatti hidhamee akka jirutti dugdaan fiigaa ture jechuudha. Sobiis akka qaba jarana. Haata’uutii, Gaddi keenya jabaadha. Gumaa gootaa gootatu baasa. Qabsoon itti fufa.
Hubadhaa, ammas duraas obboleewwan Gammachuu Gaaromsaa lama badii tokko malee Oromoo fi Wallaggaa ta’u qofaan baqaa irra jiru.
Gama biraan aanaa Aayiraa ganda qonnaan bulaa Lalisaa Birbirii fi Lalisaa Guyyee keessatti Boqqolloo hin ga’iin jiru RIB maasii qonnaan bulaa irraa ciraanii balleessaa jiru. Sababi isaan himatan; WBO tu keessa taa’ee nu rukutuu danda’a jedhu. Garuu, uummata godinichaa keessatti argamu akka beela’uuf ta’e jedhaanii midhaan hooyiruu irraa maancaasaa kan jiru ta’uu agarsiistuu tokkodha.
Kun utuu Kanaan utuu jiruu, guyyaa kaleessaa gaafa 16/01/2012 waaree booda naannoo sa’a 12:30 keessa abbaafi ilmi Abdii Jijoo fi obbo Jijoon, akkasumas Yaazee Addaamuu bakka damaraa waldaa Ortodoksii turaanii gara manaatti osoo galaa jiranii RIB dhugaatiin machoofte/farshoofte itti baatee raasasa itti roobsuun lubbuun nama lamaa darbee jira. Obbo Jijoo, fi Yaazee Addaamuun lubbuun darbee kan jiru yoo ta’u, Abdii Jijoo hospitaala Aayiraa galee jira. Waaqayyoo dhiiga ijoollee isaa harkaa keetii barbaada yaa Abiyyii, Akeeldaamaa!
Sanyii duguuggan kun: Maaliif? Hanga yoomittii? Diinatu nu bulchaa jiran se’a. Waayyaanee mitii xaaliyaaniinu gochaa akkasii ijoollee maccaa irratti raawwattee hin beektu goonkumaa. Kana taate Oromoo hireen dhiyaa bara bulchiinsa mootummaan Oromoodha jedhamu. Kan qabu qee’eefi maatii isaa gatee gara Finfinneetti keessaa baqatee jira. Qonnaan bulaafi iyyeessatu hafee jira biyyatti. Isaan kana warri RIB’n ajjeeffamaafi gidirfamaa jiru. Mootummaan Abiyyii waan facaafte hammachuuf jira. Waaqayyoo Jabaadha. Gatii hamootaa kaffaluuf fagoo hin jiru.
Injifannoo WBO Zoonii Bahaa
Godina Harargee Lixaa Ona Bookee Naannawaa magaalaa Sabaatti lafa addaa To malee jedhamutti RIB sakatta’insaaf baate dursa odeessa RIB quuqama Oromummaa qaburraa qaqqabeen WBOn RIB Paatiroolii 3n sakatta’insaaf baate haxxee hidhuun tarkaanfii fudhateen Loltoota RIB 14 battala ajjeesuun konkolaataa isaanis hojiin ala taasisee meeshaa garaagaraa sakatta‘insaaf RIB ittiin baate booji’uun injifannoon WBOn galee jira.
Sources #WBO_tube .